Myoma - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီနဒေ့ေါကျတာစုအိမျမှာ အမရှေ့ာက အဒျေါတဈယောကျရောကျလာလို့ ထိုငျစကားပွောနတေဲ့ နား ဒေါကျတာစု ရောကျသှားသညျ။ အဒျေါက အမကေို့အာပေါငျအာရငျးသနျသနျပငျ
” မမသိတယျမှတျလား ရှာက ငှတေိုးခြေးစားတဲ့ဒျေါဆုံဆိုတဲ့အပြိုကွီးလေ အသကျ၄၀နားနီးမှ ဗိုကျကွီးပူလာလို့ ရနျကုနျတကျကုနရေတယျ။ ဗိုကျကွီးပူလာမှတော့ ဗိုကျကွီးလို့ ရနျကုနျတကျမှေးတာပဲ နမေယျ။”
အဒျေါတဈယောကျ သူ့ဟာသူပွော သူ့ဟာသူမှတျခကျြပေးနလေသေညျ။
ဒီတဈခါတော့ ဒေါကျတာစု ” တတျသညျ့ပညာမနသော” ပဲချေါရမလား? လှဲနသေညျ မြားကို ပွငျပေးမှဖွဈတော့မယျဟုတှေးပွီး
” အဒျေါရယျ သူက အိမျထောငျမရှိဘူးဆို ဗိုကျကွီးတာမဟုတျဘဲ သားအိမျအသားလုံးတညျတာ ဖွဈနပေါဦးမယျ၊ သူမြားကိုသှားပွီး”
အဒျေါက မကျြလုံးအပွူးသားနဲ့ “ဘာလဲ သားအိမျအသားလုံး? ကငျဆာကိုပွောတာလား?”
ဟူး သူ့ပွောမှ ဒျေါဆုံလညျးရ စရာမရှိတော့ဟု ဒေါကျတာစု တှေးလိုကျသညျ။
” အဒျေါကို ဗဟုသုတရအောငျရှငျးပွလိုကျမယျ။ ရှာကလူတှလေညျး သခြောပွနျပွောပွလိုကျနျော” သူ့လညျး သခြောမှာလိုကျရသေး။
“အေးပါအေ ငါတို့က ကနျြးမာရေးနဲ့ဝေးတယျအေ့”
” ဒီလိုအဒျေါရဲ့ သားအိမျအသားလုံးဆိုတာ ကငျဆာမဟုတျဘူး။ သားအိမျကွှကျသားတှေ ပှားလာမြားလာရာကနေ ကွှကျသားအလုံးဖွဈလာတာ။ အသကျ ၃၅_၄၅ကွား ကလေးမမှေးဘူးတဲ့လူ၊ ကလေး နဲနဲပဲမှေးထားတဲ့လူ၊ အပြိုကွီးတှမှော အဖွဈမြားတယျ၊ အရှယျအစားက စပဈြသီး အရှယျကနေ ၃လ ၄လ ကိုယျဝနျအရှယျထိ ကွီးတတျလို့ ကိုယျဝနျရှိတယျလို့ အထငျမှားကွတတျတယျ။ အမြိုးသမီးဟျောမုနျးတှကွေောငျ့ အဓိကဖွဈလို့ သှေးဆုံးပွီးသှားရငျလညျး သူ့ဟာသူ ပွနျကြုံ့သှားတတျကွတယျ။ ”
အဒျေါကလဲ” ငါတို့ကအလုံးဆိုကွောကျတယျအေ။ ငါလဲ ကလေးတဈယောကျပဲမှေးထားတာဆိုတော့ ဘယျလိုလက်ခဏာတှပွေတတျလဲအေ”
” အလုံးရှိတယျဆို ရာသီသှေး အရငျကထကျမြားလာတတျတယျ။ ရာသီလာရကျ ကွာလာတတျတယျ။ ဆငျးရငျလညျးသှေးအတုံးအခဲတှအေမြားကွီးပါတတျတယျ။
ရာသီလာခြိနျမဟုတျဘဲသှေးဆငျးတတျတယျ။ သားအိမျနရောမှာ ခဲဆှဲထားသလို လေးလေးပငျပငျခံစားရတတျတယျ။ အရမျးကွီးလာရငျတော့ ဆီးအိမျကိုဖိလို့ဆီးခဏခဏသှားတာ၊ ဝမျးခြုပျတာအပွငျ။ ဗိုကျကွီးသလို အလုံးပျေါလာတတျတာတှပေဲ”
” အဲ့လိုလက်ခဏာတှပွေတယျဆို ကှနျပွူတာဓာတျမှနျ( Ultrasound) ရိုကျ အလုံးအသေးအကွီး၊ အသကျအပိုငျးအခွားပျေါမူတညျပွီး ဟျောမုနျးဆေးတိုကျ၊
တအားကွီးရငျ အလုံးထုတျဖို့ခှဲတာ၊ တအားလိုအပျရငျသားအိမျထုတျတာထိ ကုသရတတျပါတယျ။”
“အဒျေါက “ဟုတျလားအေ။ ခုမှကွားဘူးတာပဲ ။ ငါတို့ရှာမှာတော့ အပြိုကွီးဗိုကျပူတော့ ဟိုဟာဒီဟာပဲ ထငျနကွေတာအေ့ ။ တူမလေးပွောမှပဲ ရှာထဲငါလိုကျပွောတော့မယျ”
ဒေါကျတာစုလညျး စိတျထဲမှ ကျုယျ့ အဒျေါကိုယျယုံတယျ “ရပျကှကျမောငျး”မို့ သူရှာပွနျခြိနျ ရှာကလူတှေ ကနျြးမာရေးအသိလေးတိုးပွီပေါ့လို့ ကွံဖနျတှေးရငျး ဝမျးသာနတေော့သညျ။
ဒီနေ့ဒေါက်တာစုအိမ်မှာ အမေ့ရွာက အဒေါ်တစ်ယောက်ရောက်လာလို့ ထိုင်စကားပြောနေတဲ့ နား ဒေါက်တာစု ရောက်သွားသည်။ အဒေါ်က အမေ့ကိုအာပေါင်အာရင်းသန်သန်ပင်
” မမသိတယ်မှတ်လား ရွာက ငွေတိုးချေးစားတဲ့ဒေါ်ဆုံဆိုတဲ့အပျိုကြီးလေ အသက်၄၀နားနီးမှ ဗိုက်ကြီးပူလာလို့ ရန်ကုန်တက်ကုနေရတယ်။ ဗိုက်ကြီးပူလာမှတော့ ဗိုက်ကြီးလို့ ရန်ကုန်တက်မွေးတာပဲ နေမယ်။”
အဒေါ်တစ်ယောက် သူ့ဟာသူပြော သူ့ဟာသူမှတ်ချက်ပေးနေလေသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒေါက်တာစု ” တတ်သည့်ပညာမနေသာ” ပဲခေါ်ရမလား? လွဲနေသည် များကို ပြင်ပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဟုတွေးပြီး
” အဒေါ်ရယ် သူက အိမ်ထောင်မရှိဘူးဆို ဗိုက်ကြီးတာမဟုတ်ဘဲ သားအိမ်အသားလုံးတည်တာ ဖြစ်နေပါဦးမယ်၊ သူများကိုသွားပြီး”
အဒေါ်က မျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ “ဘာလဲ သားအိမ်အသားလုံး? ကင်ဆာကိုပြောတာလား?”
ဟူး သူ့ပြောမှ ဒေါ်ဆုံလည်းရ စရာမရှိတော့ဟု ဒေါက်တာစု တွေးလိုက်သည်။
” အဒေါ်ကို ဗဟုသုတရအောင်ရှင်းပြလိုက်မယ်။ ရွာကလူတွေလည်း သေချာပြန်ပြောပြလိုက်နော်” သူ့လည်း သေချာမှာလိုက်ရသေး။
“အေးပါအေ ငါတို့က ကျန်းမာရေးနဲ့ဝေးတယ်အေ့”
” ဒီလိုအဒေါ်ရဲ့ သားအိမ်အသားလုံးဆိုတာ ကင်ဆာမဟုတ်ဘူး။ သားအိမ်ကြွက်သားတွေ ပွားလာများလာရာကနေ ကြွက်သားအလုံးဖြစ်လာတာ။ အသက် ၃၅_၄၅ကြား ကလေးမမွေးဘူးတဲ့လူ၊ ကလေး နဲနဲပဲမွေးထားတဲ့လူ၊ အပျိုကြီးတွေမှာ အဖြစ်များတယ်၊ အရွယ်အစားက စပျစ်သီး အရွယ်ကနေ ၃လ ၄လ ကိုယ်ဝန်အရွယ်ထိ ကြီးတတ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ အထင်မှားကြတတ်တယ်။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းတွေကြောင့် အဓိကဖြစ်လို့ သွေးဆုံးပြီးသွားရင်လည်း သူ့ဟာသူ ပြန်ကျုံ့သွားတတ်ကြတယ်။ ”
အဒေါ်ကလဲ” ငါတို့ကအလုံးဆိုကြောက်တယ်အေ။ ငါလဲ ကလေးတစ်ယောက်ပဲမွေးထားတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေပြတတ်လဲအေ”
” အလုံးရှိတယ်ဆို ရာသီသွေး အရင်ကထက်များလာတတ်တယ်။ ရာသီလာရက် ကြာလာတတ်တယ်။ ဆင်းရင်လည်းသွေးအတုံးအခဲတွေအများကြီးပါတတ်တယ်။
ရာသီလာချိန်မဟုတ်ဘဲသွေးဆင်းတတ်တယ်။ သားအိမ်နေရာမှာ ခဲဆွဲထားသလို လေးလေးပင်ပင်ခံစားရတတ်တယ်။ အရမ်းကြီးလာရင်တော့ ဆီးအိမ်ကိုဖိလို့ဆီးခဏခဏသွားတာ၊ ဝမ်းချုပ်တာအပြင်။ ဗိုက်ကြီးသလို အလုံးပေါ်လာတတ်တာတွေပဲ”
” အဲ့လိုလက္ခဏာတွေပြတယ်ဆို ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်( Ultrasound) ရိုက် အလုံးအသေးအကြီး၊ အသက်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး ဟော်မုန်းဆေးတိုက်၊
တအားကြီးရင် အလုံးထုတ်ဖို့ခွဲတာ၊ တအားလိုအပ်ရင်သားအိမ်ထုတ်တာထိ ကုသရတတ်ပါတယ်။”
“အဒေါ်က “ဟုတ်လားအေ။ ခုမှကြားဘူးတာပဲ ။ ငါတို့ရွာမှာတော့ အပျိုကြီးဗိုက်ပူတော့ ဟိုဟာဒီဟာပဲ ထင်နေကြတာအေ့ ။ တူမလေးပြောမှပဲ ရွာထဲငါလိုက်ပြောတော့မယ်”
ဒေါက်တာစုလည်း စိတ်ထဲမှ က်ုယ့် အဒေါ်ကိုယ်ယုံတယ် “ရပ်ကွက်မောင်း”မို့ သူရွာပြန်ချိန် ရွာကလူတွေ ကျန်းမာရေးအသိလေးတိုးပြီပေါ့လို့ ကြံဖန်တွေးရင်း ဝမ်းသာနေတော့သည်။
Puerperium And Taboos